कस्तो कलियुग आयो आफ्नै मान्छेबाट डराउनुपर्ने ! श्रीमानबाट श्रीमतीको हत्या देखि आफ्नै छोरी हत्यारा सम्मका घटना - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०४, २०७६ समय: १६:०८:२७
आफ्नै मान्छेबाट डराउनुपर्ने कस्तो असुरक्षित समय हो यो ? श्रीमान्ले श्रीमतीको, प्रेमीले प्रेमिकाको, छोराले बाउको, साथीले साथीको ज्यान लिने घटना बढिरहेका छन् । सामान्य भनाभन, मसिना विवाद, शंका, अविश्वास आदिका कारण आफ्नैले आफ्नैलाई सिध्याइरहेका छन् । नागरिक न्युजका गोपाल दाहाल र अनिल यादवले अपराधको क्रूर दृश्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
धरान– १५, पतञ्जलिमार्गका अटलराज कार्कीको घरबाट इन्भर्टर हरायो । घरमा बत्ती बाल्दै आएको इन्भर्टर हराएपछि कार्कीले छोरा साइमनलाई सोधखोज गरे ।गत माघ १६ गते त्यही निउँमा बाबुछोराबीच भनाभन चल्दै थियो । २२ वर्षीय साइमन आक्रोशित भए । उनले आफ्ना ४५ वर्षीय बाबुको पेट र छातीमा छुरा प्रहार गरे । जथाभावी छुरा हानेर साइमन भागे । रक्ताम्य भएका अटलराजलाई आफन्त र छिमेकीले हतारहतार अस्पताल पु¥याए तर उनी बाँचेनन् । बाबुको हत्या गरेर भागेका साइमनलाई भोलिपल्ट प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । सामान्य विवादमा आवेगमा आएर आफ्नै बुबाको हत्या गरेका साइमन अहिले जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।
रेग्मी बेपत्ता भए । पछि उनको शव इलामको फएतम्पा–५ स्थित जंगलमा भेटियो । अनुसन्धानबाट थाहा भयो, उनको हत्या उनकै साथी विकको योजनामा भएको रहेछ । विक र रेग्मीबीच ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सुनको कारोबार थियो । रेग्मीलाई रकम तिर्न नसक्ने स्थिति आएपछि विकले हत्याको योजना बनाएका थिए । विकले रेग्मीलाई जंगलसम्म मोटरसाइकलमा पु¥याए । विकले भाडामा प्रयोग गरेका मान्छेले रेग्मीलाई पछाडिबाट ह्यामरले हानेर लडाए । त्यसपछि खुकुरीले हत्या गरिएको पछि पक्राउ परेका विकले प्रहरीसमक्ष बयान दिए । ताप्लेजुङ साब्राखु सल्लेरीका ४५ वर्षीय पदम पन्धाक तेह्रथुम थोक्लुङस्थित सानीमाको घरमा बस्थे ।
त्यही गाउँमा उनका साथी थिए, ३३ वर्षीय रमेश कन्दङ्वा । पदम र रमेशको कुराकानी मिल्थ्यो । सँगै घाँसदाउरा गर्थे । एक दिन उनीहरू खानेपानीको पाइप मर्मत गर्न सँगै गएका थिए । सामान्य विषयमा उनीहरूबीच झगडा भयो । पदमले आफूले भिरेको खुकुरी निकालेर साथी रमेशको टाउकोमा प्रहार गरे । गम्भीर घाइते भएका रमेशको जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो ।
आफूले जन्माएकी छोरीले आफ्नै हत्याको योजना बुन्लिन् भन्ने माइला महर्जनले सायदै सोचेका थिए । तर, विडम्बना, उनकी छोरी संगीताले अंशबण्डाका लागि आफ्नो श्रीमान्सँग मिलेर आफ्नै बाबुको हत्या गराइन् । काठमाडौँ, टोखाकी संगीता (२०) ले नुवाकोटका सन्तोष पाण्डेसँग अन्तरजातीय विवाह गरेपछि परिवारसँग उनको खासै राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यही भएर संगीताले माइतीपट्टिबाट आफ्नो भागमा पर्ने अंश (करिब छ आना जमिन) लिन खोजेपछि बुबा र दाइसँग उनको विवाद सुरु भयो ।
त्यसपछि संगीताले अंश आफ्नो मुठीमा पार्नकै लागि बुबा र दाइलाई मार्ने योजना बुनिन् ।काठमाडौँ, बानियाँटार बस्दै आएका धादिङका विक्रम तामाङसँग २० लाख रुपैयाँमा उनले ‘मर्डरको डिल’ पक्का गरिन् । मार्ने योजना पनि बुनियो । घर नजिककै मन्दिरमा मार्ने योजना थियो । बुबालाई कुरिरहेका हत्याराहरूले अर्कै मान्छे देखेपछि त्यो दिन त्यत्तिकै बित्यो । दोस्रो दिन पुनः संगीताले मिस्त्री काम गर्दै आएका आफ्ना बुबालाई ‘ठेक्कापट्टाको काम आएको छ’ भन्दै घरनजिकैको खोलाको चौरमा बोलाइन् । त्यसपछि विक्रमको नेतृत्वमा रहेको पाँचजना युवाको समूहले ४३ वर्षीय माइलाको हत्या ग¥यो । ‘संगीताको योजना बुबा र दाइ दुवैलाई मार्ने रहेछ,’ डीएसपी दीपक रेग्मीले भने, ‘तर, माइलालाई मार्नेबित्तिकै समूहका दुई जना अत्तालिएर फरार भएछन् । त्यसपछि दाइलाई मार्ने संगीताको योजना विफल भयो । हत्यामा संलग्न सबैजना हाल कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् ।
क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरको अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष निरौला भन्छन्, ‘हत्याजस्तो जघन्य अपराध यसरी बढ्नुलाई सामान्य रूपमा लिनु हँुदैन । समाजले यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिन थाल्यो भने यो सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । बेलैमा समाज सचेत बन्नुपर्छ ।’ नागरिकन्युजबाट